साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : जिल्ला अदालत मोरङमा भोली मुद्धा दर्ता हुने - Arunkhabar.com
साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण : जिल्ला अदालत मोरङमा भोली मुद्धा दर्ता हुने
प्रकाशित : १८ बैशाख २०७५, मंगलवार १७:४३
buy Revatio online, dapoxetine reviews. विराटनगर, १८ बैशाख । साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्ड र सनम शाक्य हत्या घटना सम्बन्धी मुद्धा भोली जिल्ला अदालत मोरङमा दर्ता हुँदैछ ।
मोरङ प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मिसिल बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्धा दर्ता गर्ने भएको हो । जिल्ला न्यायाधीवक्ता पुण्य पाठकले मुद्धा दर्ताको आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी दिनु भयो । कुनै पनि घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर मिसिल बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोग पत्र तयार गर्दै अदालतमा मुद्धा दर्ता गर्छ । सुन तस्करी र शाक्य हत्याको अनुसन्धान मोरङ प्रहरीले गरेको थियो ।
तस्करी र हत्यामा संलग्न भनिएका विरुद्ध कर्तव्य ज्यान, अपहरण र संगठीत अपराध मुद्दा चलाउन प्रहरीले म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पाएको ६० दिनको समय सीमा आज सकिएको छ । घटनाको सुरुदेखिनै विवादमा तानिएका अपराध अनुसन्धान महाशाखा काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनी आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको सम्पर्कमा आइपुग्नु भएको छ । उहाँ आज दिउँसो ४ बजे विराटनगर आइपुग्नु भएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वराज पौडेल नेत्रृत्वको घटना छानविन समितिले लोहनीलाई झिकाउन मोरङ प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निर्देशन अनुसार मोरङ प्रहरीले उपस्थितीका लागि लोहनीलाई पत्र पठाएको थियो । स्रोतका अनुसार सरकारी वकिल कार्यालयले लोहनी विरुद्ध पनि अन्य अभियुक्तसंगै बुधबार अभियोग पत्र तयार पारेर अदालतमा दर्ता गर्ने सम्भावना छ । छानविन समितिले लोहनीसंग काठमाडौंमा यस अघि वयान समेत लिइसकेको छ । घटनाका मुख्य अभियुक्त मोरङ उर्लाबारीका गोरे भनिने चूँडामणि उप्रेतीसंग ‘केनेक्सन’ देखिएको भन्दै यस अघि अवकाश प्राप्त पूर्व डीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल, डीएसपी संजय राउत, प्रजित केसी, सई बालकृष्ण सञ्जेल र जवान विष्णु खड्का पक्राउ परिसकेका छन् ।
घटनामा जोडिएर २८ जना पक्राउ परिसकेका छन् । मुख्य अभियुक्त गोरे सहित २१ जना भन्दा बढी फरार रहेको प्रहरीको दावी छ । पक्राउ परेका र फरार रहेकालाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दर्ताको तयारी गरिएको हो । हराएको भनिएको तस्करीको सुन लुकाएको आरोपमा तस्करीका मुख्य नाइके गोरे समूहले करेन्ट लगाएर यातना दिने क्रममा त्यही समूहका सहयोगी मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको गत फागुन १८ गते मृत्यु भएको थियो । शाक्यको शव विराटनगरको दुर्गाचोक नजिकै गोधुली मार्गमा टेकराज मल्लले चलाएको स्कारपिओ गाडीभित्र फागुन १९ गते बरामद भएपछि घटना सुन तस्करीसंग जोडिन पुगेको हो ।
२०७४ माघ ९ गते दुवईबाट सुन नेपाल भित्रिएको खुलेको छ । त्यसपछि हराएको सुन अहिले सम्म कहाँ छ भन्ने बारेमा खुल्न सकेको छैन । घटना अनुसन्धानका क्रममा बालकृष्ण श्रेष्ठ, विरेन्द्रमान श्रेष्ठ, दोराम खत्री, लालबहादुर मगर, पुण्यप्रसाद लामा, कपिलराम गिरी, गोपाल कुमार श्रेष्ठ, भुुजुङ गुरुङ, हेमन्त गौतम, सम्बीर प्रसाद तोलाङ्गी, राजु महर्जन, टेकराज मल्ल ठकुरी, मोहन काफ्ले, नरेन्द्र कार्की, लाक्पा शेर्पा, महाविर प्रसाद गोल्यान (चाचाजी), राजन थापा पक्राउ परेका छन् ।
त्यस्तै राजेन्द्रकुमार शाक्य, गोविन्द निरौला, अमरमान डंगोल, तुलाराम थारु, राजन कुमार, माधव घिमिरे भनिने मदनप्रसाद घिमिरे, विकासराज खनाल, प्रजित केसी, संजय राउत, बालकृष्ण सञ्जेल र विष्णु खड्का पक्राउ परेका छन् ।pharmacy
घुस दिने सिंचाई डिभिजन प्रमुख पक्राउ
१० स्कूल फिनालेमा प्रवेश
मोरङ जिल्ला ए डिभिजन लिग फुटबल सुरु
सुनसरीको बर्जुमा विश्व हात धुने दिवस मनाईयो
एमाले मोरङले तोक्यो महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनका लागि मतदान केन्द्र ( मतदान अधिकृतको नामावली सहित)
प्रदेश नं १ मा एमाले संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन हुने
order tadalafil, online Zoloft. विराटनगर २२ माघ । प्रदेश नं १ मा नेकपा (एमाले)को संसदीय...
अनेरास्ववियूबाट आफ्नो राजनीति सुरुवात गर्नुभएका एमाले नेता जीवन घिमीरे यूवा संघ हुँदै अहिले एमालेको केन्द्रीय...